साउदीले विश्वमै पहिलो पटक दियो कृत्रिम मानव(रोबोट)लाई नागरिकता ( भिडियो सहित) - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
साउदीले विश्वमै पहिलो पटक दियो कृत्रिम मानव(रोबोट)लाई नागरिकता ( भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: १२ कार्तिक २०७४, आईतवार October 29, 2017
असनेपाल न्युज । साउदी अरब कृत्रिम मानव (रोबोट) लाई नागरिकता दिने विश्वमै प्रथम देश बनेको छ । सोफिया नामक रोबोटलार्इ साउदीले नागरिकता दिइएको छ । साउदी अरबको पब्लिक रिलेशन अफेयर्स कमिटीले आफ्नो आधिकारिक ट्विटर मार्फत यो दबर सार्वजनिक गरेको हो । ट्वीटरमा सोफिया साउदीले नागरीकता दिएको विश्वकै पहिलो रोबोट भएको उल्लेख गरीएको छ ।
नागरिकता पाएपछि रोबोट सोफियाले खुसी हुँदै भनेकी छिन्, ‘म यस सम्मानबाट अत्यन्तै गाैरव महसुस गरिरहेको छु, पहिलो पटक रोबोटलाई नागरिकताबाट पहिचान गरीनु ऐतिहासिक भएको छ । म मानिसहरुका बीच भरोसा बढाउने काम गर्नेछु ।’
सोफियाले रियादमा आयोजना हुने फ्युचर इन्भेस्टमेन्ट समिटमा सभाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिन् । सम्मेलनमा साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमानले देशलाई आधुनिक बनाउने योजना अन्तर्गत लिबरल इस्लामको पुनर्स्थापना आफूले चाहेको बताएका छन् ।
सोफियालाई हङकङका हेनसन रोबोटिक्सले बनाएको हो । मुहारको एक्सप्रेसन बुझ्ने र जोसूकैसँग सामान्य कुरा गर्न सक्ने क्षमता यो रोबोटमा छ । पत्रकार एन्ड्र्यु सोरोकिनले सोफियाको अन्तरवार्तासमेत लिएका थिए । सोरोकिनको प्रश्नहरुको जवाफ सोफियाले निकै कुशलतापूर्वक दिएकी थिइन् । रोबोट सोफियासँग लिइएको अन्तरवार्ता जस्ताको तस्तै :
जनावरमाथिको भेदभाव विरूद्द एक नाैलो शैलीमा विरोध
असनेपाल न्युज । जनावरमाथिको भेदभावको विरोधमा बेलायतको राजधानी लण्डनमा अनौठो शैलीमा विरोध गरिएको छ । […]
अमेरिकी महिलाले जितिन् विश्वकै सबैभन्दा धेरै धनराशीको चिठ्ठा
एजेन्सी,भदौं १२ ।उत्तर अमेरिकाको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र व्यक्तिगत रुपमा विश्वकै सबैभन्दा धेरै धनराशीको […]
विश्व रेकर्ड राख्न यस्तो सम्म गर्छन् मानिसहरू
असनेपाल न्युज । विश्व रेकर्डमा नाम लेखाउने चाहाना कसको चाँहि हुँदैन होला र ? निश्चय पनि गीनीज बुक अफ वर्ड […]
पृथ्वीदेखि अन्तरीक्षसम्मको लिफ्ट बनाउँदै जापान, सम्भव होला त ?
एजेन्सी । जमिनबाट आकाशसम्मको लिफ्ट साँच्चिकै सम्भव छ त ? एउटा जापानी कम्पनी अहिले यसलाई सम्भव बनाउने तरखरमा […]
यस बाँदरले हार्‍यो आफ्नै सेल्फीको मुद्दा
भदाै २८ । सन् २०११ मा इन्डोनेशियाको जङ्गलमा बाँदरले आफैँ क्यामरा लिएर दाँत देखाउदै सेल्फी खिचेको थियो । […]
खाटबाट ओर्लिन नमान्ने खसी
भदाै १६, असनेपाल न्युज । मुस्लिमहरुको चाड इद–अल अधा नजिकिँदै छ। यसैले भारतको पुरानो दिल्लीस्थित जामा […]